Namoy olomanga ny kanto Malagasy. Nindaosin'ny fahafatesana androany, tamin'ny 3ora maraina tao amin'ny hopitaly be Toamasina, i Dors na Razanadahy Théodore Stéphan, fa izay ny anarany feno.
Mpikambana mpamorona ny tarika mpihira Dors Groupe izy, tarika niforona tamin'ny 1983 ary anisany tao amin'ny tarika Kaiamba.
Maro ny hiran'ny tarika, anisany nahalalana azy ny "Tsy nampoiziko", "Tsy anjara", "Leboto", "Mitongava mamangy",...
Zaza nanaovana « Ombay mitady » : Very teny Soarano kely Ambohijanaka, hita teny Dorodosy akaikin’Alasora
Zazalahy kely miisa telo nanaovana filazana« Ombay mitady » teny Soarano kely Ambohijanaka sy naparitaka teto amin’ny tambazotran-tserasera ny Alarobia 12 Jona 2019 no hitan’ny Polisy tany Dorodosy akaikin’Alasora.
Nanao ny fikarohana nandritra ny alina manontolo ny Polisy, rehefa nahazo fampandrenesana, ka ny Alakamisy 13 jona tokony ho tamin’ny 08 ora maraina no hita teny an-tanimbary teny amin’ny faritra Dorodosy akaikin’Alasora iny izy telo lahy kely, izay marihina fa 08 taona ny zokiny ary 06 taona ny zandriny indrindra.
Noho ny kapoka nataon’ny Ray aman-drenin’ny iray amin’izy ireo no nambaran’ny zazalahy iray ho nampitsoaka ka izy indray avy eo no nitaona ireo namany roalahy niaraka taminy.
Efa tafaverina soa aman-tsara amin’ireo Ray aman-dreniny omaly ireto zaza very ireto.
vendredi, 14 juin 2019 08:38
CAN 2019 – Lalao ara-pirahalahiana: Madagasikara vs Maoritania
Hihaona amin'ny lalao ara-piralahiana ao Maroc anio i Madagasikara sy Maoritania, ekipa roa samy sambany vao handray anjara amin'ny CAN.
Lalao fitsapana fahatelo sady farany hatrehin’ny Barea io, mialoha ny hiatrehana ny CAN. Aorian'ity lalao ity no hivoaka ny lisitr’ireo mpilalao 23 handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra ho any Egypta.
vendredi, 14 juin 2019 08:37
Journée Mondiale des donneurs de sang.